Ma Dhabaa Yabooha Ethiopia? – Rasaasa News
Ma Dhabaa Yabooha Ethiopia?
Feb 15, 2018 ethiopia, heshiis, nabad, nairobi, Ogaden, ONLF, Somali
Nairobi, Feb 15, 2018 – Waxaa si kadis ah warbaahinta aduunka u soo galay todobaadkii hore war sheegaya in Ethiopia iyo ONLF wadahadal caalami ah uga bilowday magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Warkaaswaxaa xigay waraysiyo laga qaaday labo xubnood oo ONLF ah, mid jooga Australia iyo mid jooga Nairobi. Labada masuul waxay rumeeyeen xogtii laga helay war baahinta, waxayna sheegeen in (ONLF) iyo Ethiopia uu miiska u saaran yahay wada xaajood ah in cod laga qaado dadwaynaha Soomaalida Ogadeniya (vote to self-determination).
Waa war lagu farxo, mana ahayn wax la filayey in ay Ethiopia si dhib yar u tidhaahdo Ogadenia cod ha la waydiiyo. Arintaasi waxay ku jirtaa dastuurka Ethiopia, laakiin magac ahaan umbay ugu jirtaa, hadii la samaynayana waxaa la mari lahaa wax uu qodobkaasi sharxayo.
Dalka Itoobiya kama jirto dimoqraatiyada arimahaas lagu soo qaadi karo, laakiin waxaa ka jira cadaadiska ugu xun aduunka. Daganaansho la,aanta ka jirta xiligan Ethiopia waxay qabsatay war baahinta caalamka.
Gabalka Soomaalida Ogadeeniyana dhinac walba Itoobiya wuxuu kaga jiraa meesha ugu hoosaysa, mana meel sharci iyo kala dambayn ka jirto, laakiin waxaa saaran cadaadis xun iyo xukun dag dag ah oo la saaray 2007.
Ururada caalamiga ah looma ogola in ay galaan gabalka Soomaalida. Waxaa kale oo uu gabalku ka go,an yahay Ethiopia inteeda kale, ka dib kolkii ay xukuumadu ka dhex abuurtay Soomaalida iyo Oromada colaad.
Hadaba, iyada oo ay arimahaasi jiraan ayey arintani noqotay qaadanwaa, in Ethiopia ay si fudud ONLF uugu yaboohaysoxoriyad. Waxaana markiiba ii muuqatay in ay jirto iskuday siyaasadeed oo ay dawlada Ethiopia ku doonayso in ay iskaga fududayso culayska siyaasadeed ee gudaheeda xiligan ka jira.
Maalin ka dib, waxaa Nairobi ka soo dhex muuqday Cabdi Iley iyo afar xubnood oo ONLF ah iyo General Gebre. Kolkaas baa waxaa cadaaday shakigii ahaa siday ku dhici kartaa, in Ethiopia oo uusan culays fuulin si dhib yar cod bixin ugu yaboohdo Ogadeeniya.
Shirku wuxuu ahaa sida laga fili karo Ethiopia oo xukuumada khayaano ku dhisan, waxaana isugu yimid; afar xubnood oo ONLF ah, Madaxwaynaha maamul gabaleedka Soomaaliyeed ee Jubaland, Xubno Soomaali Kenyan ah iyo madaxwaynah Ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo uu garab fadhiyo Gabre Gaab. Kuligood kolka la isu geeyo waa hal, waa Soomaali waxayna kal matalaan saddex dal marka laga reebo xubnaha ururka ONLF.
Dubai, waxaa tagay bishii hore Cabdi Iley oo qaylo ah, oo leh Oromo ayaa dadkii Soomaalida ahaa baa,bisay oo colaad u qaaday Ethiopiana way qabsanaysaa. Wuxuu isaga oo iska oohinaya xubno ONLF ah ugu sheegay in ay xoriyad qaataan inta ayna xukuumadani burburin. ONLF, waxay tidhi noo keen masuuliyiinta xukuumada aad u shaqayso, saraakiil Tigray ah ayuu u keenay. ONLF, waxay isku qancisay dhibaatada ka jirta Ethiopia ka faa,iidaysta, kolkba hadii saraakiishii Ethiopia haysatay ay balanqaa wadaan.
Kolkii ay saraakiishii khiyaanada, Cabdi Iley iyo ONLF isku afgarteen wixii la isku ogaa ayey ONLF codsatay in go,aanka ay saxiixaan saraakiil arimaha dibada ka socota. Gebre, wuxuu yidhi Cabdi Iley baa u saxiixi dhinaca Ethiopia, kolkaas ayaa lagu kala kacay.
Xubnaha ONLF, ee kulanka yimid, waxay ahaayeen jilib culus in badan ku soo jiray halganka, afkaarta kulankana ururka madaxdiisu way isku raacsanaayeen, marka laga reebo xubno aan cod dheer ku lahayn ururka. Sida wax u dhaceena haatan waxaa cad in ay munaafaqadi jirtay, loogu talo galay in lagu burburiyo ururka ONLF.
Dirba waxaa soo baxaya didmo xoog leh iyo isku dhexyaac ah, yaa masuul ka ahaa in sidan wax u dhacaan. Waxaana suuragal ah in uu mar labaad ururka dhaxdiisa kala jab ku yimaado.
ONLF: Siyaasad Mise Siriq